Qoysaska Militariga | Child Care Aware of Minnesota
Home › Somali ›
Give Army Parents a Break, Waa Daryeel Sii-hayn Ilmo oo Marmar ah
Qoysaska Militariga ee Barnaamijku u Banaan Yahay waxa la siinayaa 8-16 saacadood oo ah daryeel sii-hayn ilmo iyada oo aan wax kharash ah la saarin Qoysaska Militariga.
Operation Military Child Care, Gargaar ah Fiiga, Waa Taageero Daryeel Sii-hayn Ilmo oo ah Wakhti Buuxa
Xubnaha qoyska ee dhammaan laamaha militariga ee la hawlgaliyay waxay la siiyaa gargaar ah fiiga oo ku saabsan adeegyada daryeelka sii-haynta ilmaha oo ah wakhti buuxa ama wakhti nus ah.
Marka aad tahay waalid ciidan, maxaad aad ku sameyn lahayd xoogaa ah wakhti firaaqo oo aad heshid?
Waxa lagugu martiqaadayaa inaad nasasho qaadatid inta caruurtaadu ku istareexayaan barnaamij daryeel sii-hayn ilmo oo leh tayo sare.
Waxa aad mutaysatid taageeradayada!
Beeshaadu waxay kaaga mahadnaqaysaa huridda weyn ee aad sameysay waxana aannu la shuraakownay xirfadley daryeel sii-hayn oo liisan leh si laguu siiyo nasasho aad si fiican u istaahishid. Iska soo bixi biilasha, soo adeego ama kaliya iska naso.
Maxay Qoysasku helaan?
Qoysaska Ciidanka ee Barnaamijku u Banaan Yahay waxay helaan 8-16 saacadood oo ah daryeel sii-hayn ilmo bil kasta taasoo ah ilmo kasta ilaa da’da 12.
Ayuu u Banaan Yahay?
Si adiga, qofka aad is qabtaan ama Mas’uulka la magacaabay ugu banaanaado barnaamijka "Give Army Parents a Break", waa inaad joqoraafi ahaan kala firidhsan tihiin:
Ciidan Qoraha "Accessions Command"
ROTC Cadet Cadre (Tababareyaasha)
Ilaalada Ciidanka Qaranka (Army National Guard) ee la hawlgaliyay
Askari Kayd Ciidan (Army Reserve soldier) ee la hawlgaliyay. Accessions Command
Sidee baan ku bilaabaa?
Fadlan hay’adda Illaha & Gudbinta Daryeelka Sii-haynta Ilmaha (Child Care Resource & Referral agency) ee degmadaada kala xidhiidh 888-291-9811 si aad u weydiisatid macluumaad iyo u gudbin bixiyeyaasha daryeel sii-hayn ilmo ee ka qaybgalaya barnaamijka.
Codsiga Waalidka (162 KB) - English
Cadeynta Shahaadada oo ah Waalidka (16 KB) - English
Qoysaska barnaamijku u banaan yahay waxay helaan gargaar ah fiiga oo ku saabsan adeegyo daryeel sii-hayn ilmo oo ah wakhti buuxa ama wakhti nus ah. Waalidka isticmaalaya adeegyada Operation Military Child Care waxay mas’uul ka noqon karaan bixinta qayb ah kharashka (co-pay).
Operation Military Child Care (OMCC) waxa loogu talogalay qoysaska:
Askarta la siiyay amaro lagu taageero mid ka mid ah Hawlgaladan soo socda:
Askarta xaas/nin leh, waa in ninku/xaasku shaqeynayo, uu raadsanayo shaqo ama tago dugsi. Isla xeerarkan ayaa khuseeya waalid sharci oo aan is qabin oo ku nool isku hoy.
Sidee baan u bilaabaa?
Fadlan hay’adda Illaha & Gudbinta Daryeelka Sii-haynta Ilmaha (Child Care Resource & Referral agency) ee degmadaada kala xidhiidh 888-291-9811 si aad u weydiisatid macluumaad oo u gudbin bixiyeyaasha daryeel sii-hayn ilmo ee ka qaybgalaya barnaamijka.
Booqo rugta internetka ee NACCRRA si aad u:
Buuxiso codsiga internetka lagu buuxinayo oo keen dukumentiyada la rabo
Ka-hor Inta Aanad Bilaabin Baadhista Daryeel Sii-hayn Ilmo
Hel Daryeel Sii-hayn Ilmo
Doorashada Daryeelka Sii-haynta Ilmaha
Daryeelka Sii-haynta Ilmaha ee Guul Leh
Bixinta Kharashka Daryeelka Sii-haynta Ilmaha